Fitaovana Twitter hampidina ny bitsika rehetra | Avy amin'ny Linux
Twitter dia efa naneho hevitra tamin'ny fotoana lasa izay ny fananganana a fitaovana fampidinana ireo bitsika rehetra nataonao. Ilay CEO, Dick Costolo izay nanonona an'io alohan'ny faran'ny taona a fitaovana fampidinana ireo bitsika rehetra nataonao.
Androany dia nanomboka namela ny fitaovana fampidinana ireo bitsika rehetra nataonao ho an'ny mpampiasa sasany, na dia mbola tsy misy ho an'ny rehetra aza, antenaina fa ho lasa mihetsika tsikelikely manerana ny tamba-jotra.
Ho an'izay, handefa mailaka voalohany izy ireo hampandre anay ny fampandehanan'ity serivisy ity, ary amin'izay izahay vao hahita ny safidy ao amin'ny faritra fikirakirana ny kaonty twitter anay. Mba hampiasana ny safidy dia tsy maintsy tsindrio "Ny arisivanao Twitter".
Raha vao navadika ny "Ny arisivanao Twitter" dia handray mailaka miaraka amin'ny rohy mankany misintona ny tantaran'ny bitsika amin'ny endrika html voahidy anaty zip, na azonao sintonina avy amin'ny kaontinao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Fitaovana Twitter hampidina ny bitsika rehetra nataonao